Sida loo Beddelaan / Guba TS in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
Guba TS in DVD
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan / Guba TS in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
TS uu awood u leeyahay in multiplex audio digital iyo video iyo waafajinta audio / video. Waxa kale oo ay beddeli karaan khaladaadka gaadiid badan warbaahinta aan lagu kalsoonaan karin. Waxaa si gaar ah loo isticmaalo oo ku saabsan codsiyada, tusaale ahaan DVB ama ATSC. Haddii aad rabto in aad ku gubi files TS in DVD disc u ciyaaro ciyaaryahanka iyo TV DVD ama badbaadinta TS video inay DVD ah ee gurmad, waxaad u baahan tahay in loogu badalo TS in DVD . Halkan waxaan ku talinaynaa ah TS DVD gubi hufan si ay u caawiyaan in aad hesho waxa ay samaysay la.
Wondershare DVD Creator (Windows 8 taageeray) waa TS DVD gubi kaamil ah inuu kaa caawiyo inaad badalo files TS in DVD si fudud. Ka sokow, waxay u bedeli karaan oo dhan qaabab video caan ah si ay DVDs ka SD iyo HD videos sida AVI, TS, MPEG, MP4, wmv, MOV, MP4, M2TS, TP, TRP, iwm la DVD bedeley kartoo. Editor ayaa la dhisay-in gelineya inaad xaalkaa videos si dhakhso iyaga retouch! Haddii aad hesho Mac ah, fadlan ka DVD Creator for Mac . Talaabooyinkaasi waxay ku gubi DVD ka files TS ee Mac (Snow Leopard, Mac OS X Libaaxa ka mid ah) iyo PC waa isku mid. In talaabooyinka soo socda, waxaan qaadi Win version tusaale ahaan (Windows 10 ka mid ah).
Free download TS in DVD gubi:
Sida loo badalo TS in DVD talaabo talaabo ah:
Tallaabada 1. Load TS filimada in TS ay u DVD Converter
Hit "Import" in ay dajiyaan videos. Added videos lagu soo bandhigi doonaa oo Midigta in thumbnails. Waad beddeli kartaa si video iyo abaabulo DVD horyaal by jiididda fudud iyo dhibic. Added videos la previewed karaa xaq.
Tallaabada 2. Edit TS videos si dhakhso iyaga retouch
Hawlaha Video tafatir sida dalagga, isku shaandheyn, saamaynta video dhigay, ku dar watermarks, jar, iwm waxaa la siiyaa in this TS in DVD gubi. Si fudud riix badhanka edit ah video dhinaceeda ama muujiyo video ah oo xaq guji waxa, markaa dooran "Edit" in la furo suuqa kala Video Edit.
Tallaabada 3. Dooro DVD menu ah ee aad DVD qoraalka
40 Foomamka DVD menu oo lacag la'aan ah waxaa lagu bixiyaa si aad tixraac. Waxa kale oo aad la shakhsiyeeyo karaa badhamada, mab, soo jeeda, thumbnails, iwm ee menu DVD sida aad jeceshahay.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha iyo gubi files TS in DVD
Ka dib markii dhammaan goobaha, ku eegaan mashruuca DVD iyo weeraray "Guba" si loogu badalo TS in DVD. Wondershare DVD Creator sidoo kale gelineya inaad doorato "High Quality" dib u qabsato tayada ilaa xadka ugu badan. Marka dhamaystiran, DVD disc .TS ee tuurid doonaa, markaas waa inaad ka ciyaari kara DVD aad guriga ciyaaryahanka.
Waxa kale oo aad kari tutorial video ee TS in DVD diinta halkii.
Ayaa qaab file .TS loo isticmaalaa in lagu baahin-qeexidda sare TV (HDTV). .TS File kordhin bixiyaa qaababka qaladka la saxo gaadiid badan warbaahinta aan lagu kalsoonaan karin, waxaana loo isticmaalaa in codsiyada warbaahinta sida DVB, IPTV iyo ATSC. Waxa waxa la barbar dhigay il barnaamijka, iyo sidoo kale loogu tala galay warbaahinta dheeraad ah oo lagu kalsoonaan karo sida DVD-yada. Ha isku qaldin .TS file la folder _TS, taas oo Video_TS fayl DVD la odhan jiray oo Audio_TS. Si aad u daawato qeexitaanka sare TS videos on TV ama computer, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo in ay qaab ay taageerayaan hore. Halkan waa tutorial wanaagsan oo ku saabsan sida loo wareejiyo file TS in qaab kasta oo si fudud oo dhaqso.
Top 5 DVD lagu bedelan karo Virtual